Enweghị m ike ime ya niile! | Martech Zone
Enweghị m ike ime ya niile!
Friday, December 9, 2011 Friday, December 9, 2011 Vlọ Lavon
Mgbe o ruru gburugburu ezumike ahụ, ị ​​na-anụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu otu ha nwere ike isi jiri di na nwunye karịa karịa ụbọchị. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ha nwere ike iji onwe ha kụọ onwe ha, ha nwere ike ịnọ ebe abụọ n'otu oge ma nweta ọtụtụ ọrụ karịa. Otu ihe a nwere ike ikwu site na ndị ahịa na mmetụta ha na-enwe banyere mmemme email ha. Imirikiti ụlọ ọrụ anaghị enwe okomoko nke otu ndị na-ere ahịa email ma na-amanye ịdabere na otu onye ma ọ bụ mmadụ ole na ole iji jikwaa mmemme ha niile.
Enwetara m ya, yabụ ka m nye gị echiche ole na ole nwere ike inyere gị aka inwe mmetụta dịka ị nwere otu ndị otu azụmaahịa na-ejikwa mmemme gị kama ị ga - enyere ndị ahịa aka na otu ha si ele mmemme email ha anya. Imirikiti ụlọ ọrụ anaghị enwe okomoko nke otu ndị na-ere ahịa email ma na-amanye ịdabere na otu onye ma ọ bụ mmadụ ole na ole iji jikwaa usoro ha niile.
Ịtọlite kalenda nzipu ozi bụ ụzọ dị mma iji nọrọ na nhazi, kamakwa enyere gị aka ịhazi oge. Kpebie ugboro ole ịchọrọ iziga ndị na-ege gị ntị ma detuo ya na kalenda gị. I nwekwara ike ịga ihe ruru ịchọpụta ozi ị zubere na izipụ.
Ndebiri na Ọkachamara Ọdịnaya na-enye gị ohere iwere ozi nke ịtọpụrụ ma hazie na kalenda ọdịnaya gị wee bido mepụta ya. Mepụta ọtụtụ ndebiri n'oge oge gị iji nwee aka mgbe ịnwe nzipu ozi iji pụọ n'ọdịnihu ma ị crunched maka oge.
Ndị na-ede akwụkwọ nwere ike melite na-akpaghị aka na-aza ụfọdụ ihe omume. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ debanyere aha nzipu ozi gị, ịnwere ike ịtọlite ​​ozi-e na-akpaghị aka iziga nke nabatara ha ma nye ha oku ndị ọzọ iji rụọ ọrụ.
Nwere ike iji ngwaọrụ ndị a iji bulie mbọ ịre ahịa email gị wee nye ndị na-ege gị ntị mmemme email ka ukwuu, mana na-enweghị mmetụta na ị gaghị eme ya niile. Kama, ị ga-eche na ị nwere otu ndị otu na-akwado gị n'ịchụpụ ozi ịntanetị ndị ahụ dị egwu!
Tags: ndị na-eme yaọba akwụkwọ ọdịnayakalenda nzipu ozi
Ngwọta akpaaka kachasị elu nke 20
Ndụmọdụ ịzụ ahịa dị na mpaghara maka oge ezumike ahụ
Dec 9, 2011 na 12:08 PM
Akwa post, @lavon_temple: twitter! Izu a abụwo otu n'ime izu ndị ahụ m chefuru n'ụzọ nkịtị ụbọchị ọ bụ ụnyaahụ. O yiri ka ọ na-akawanye njọ ka anyị na-eru nso na njedebe nke afọ - ụlọ ọrụ niile na-anwa imechi ntinye aka nke afọ ha ma rụọ ọrụ na Jenụwarị. Chei… anyị eburu mmiri.
Dec 10, 2011 na 2:45 PM
Enwere m mmasị na kalenda nzipu ozi. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịme nke a n'ụzọ kachasị lo-tech (nnukwu kalenda mgbidi), ọ nwere ike inye aka kpochapụ efere gị ma tinye uche gị na ihe ndị ọzọ.